General Solomon Mujuru Vanoshaya Mushure Mekutsva Zvakaipisisa
Nyamavhuvhu 16, 2011
Vaimbova mukuru wemauto, uye vari murume wemutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru, Retired General Solomon Mujuru, vashaya neChipiri mambakwedza mushure mekutsvira mumba mavo iri papurazi ravo riri kuBeatrice mudunhu reMashonaland East.
VaMujuru vanonzi vashaya kumahwani dzemangwanani mushure mekunge imba yavo yabatira moto varere, ivo vakatsva zvekusara ava madota chete.
Mutumbi wemufi unonzi waendeswa kuOne Commando Barracks kuCranborne, Harare kunoongororwa navana mazvikokota.
Mabharani wepapurazi raVa Mujuru reBlackstone riri muno muBeatrice, VaStephen Arineyo, vaudza Studio7 kuti havazivi kuti chii chaitika asi vazongoona imba yaVaMujuru yave murimi remoto.
Mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nerufu urwu.
Sachigaro weZanu-PF, VaSimon Khaya Moyo, avo vamhanyira kupurazi kwaVaMujuru mushure mekunzwa rufu urwu, vati bato ravo rarisikirwa zvikuru. VaMoyo vatsanangura VaMujuru semunhu anga ariye anobatanidza Zanu-PF vachiti namo yemusangano yaenda kusingadzokwi.
VaMoyo vatiwo vanoda kumbopa mapurisa nguva yekuferefeta vasati vataura zvakawanda nemafiro aita VaMujuru.
Mumwe wevatungamiri vesangano revakarwa muhondo yechimurenga, VaJoseph Chinotimba, vati vabaiwa panyama nhete nekufa kwaVaMujuru.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaDouglas Mwonzora, vatiwo bato ravo riri kushushikana nekufa kwaVaMujuru. Vati mufi haana kumbotsaudzira achipinda munyaya dzezvematongerwo enyika paakanga asati asiya chisoja.
VaMwonzora vati vari muchiuto vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vanofanira kutora mucherechedzo waVaMujuru. VaMwonzora vakurudzirawo kuti mapurisa anyatsoferefeta kufa kwaVaMujuru.
VaTsvangirai vatumira mashoko ekunyaradza mhuri yekwaMujuru. Vati hapana anopikisa kuti VaMujuru igamba rakarwira rusununguko rwemunhu wese.
Vati nhoroondo yehondo haingataurwe pasina zita raVaMujuru. Mutauriri wemapurisa, VaWayne Bvudzijena, vaudza Studio7 kuti vachiri kuferefeta nyaya yekufa kwaVaMujuru.
Nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, VaJohn Makumbe, vanoti zvaitika zvinopa kuti muZanu-PF mupinde mhepo.
Zvichakadai, komiti yeZanu-PF inomirira purovhinzi yeMashonaland East yaita musangano wechimbichimbi zvichitevera kushayika kwaita VaMujuru.
Sachigaro wekomiti iyi, VaRay Kaukonde, vaudza Studio7 kuti vasvitsa chikumbiro kuPolitburo yebato ravo chokuti VaMujuru varadzikwe pamarinda anovigwa magamba enyika.
Vanhu vanga vari pamba paVaMujuru kupurazi kwavo avo varamba kutaura pamhepo vati kufa kwaVaMujuru, kunosiya mibvinzo yakawanda pane mhinduro. Imba yavo yokurara yanga isina kutsva asi mavanogara ndimo matsva uye mapfupa avo anga ave marasha ndimo maawanika ari pedyo nemusuwo.
Chimwe chashamisa vanhu ava ndechekuti mahwindo anga asina ma burglar bars uye zvinonzi misuwo yemba yanga isina kukiyiwa. Vanoshanda basa rekudzima moto, ve fire brigade, vanonzi vaudzwa nezvekutsva kwanga kuchiita imba yaVaMujuru, asi vanonzi vazosvika.
VaMujuru, avo vakaberekerwa kuChivu, vanga vava nemakore makumi matanhatu nemaviri. Munguva yehondo, VaMujuru, avo vaizivikanwa nerekuti Rex Nhongo, vaive mukuru wemauto eZANLA, vachishanda vari pasi pamushakabvu Josiah Tongogara.
Pakawana nyika kuzvitonga muna 1980, VaMujuru vakaitwa mukuru wemauto. Vakasiya basa iri muna 1990, voenda pamudyandigere. VaMujuru vakapinda munyaya dzezvematongerwo enyika, vakamirira Chikomba muparamende kwemakore mashanu kubva muna 1995 kusvika muna 2000. Vanhu vakaungana kumba kwavo kuChisipite muHarare.